Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1206
TPFLM : mihodina ara-dalàna ny orinasa
« Diso tanteraka ny filazana fa misedra fahasahiranana ny Trano printy FLM (TPFLM)…», hoy i Tianarimanana Soloniaina, anisan’ny komity mpitantana eo anivon’ny TPFLM, omaly teny Antaninarenina. Nohamafisiny fa « na eo aza ny fahasarotan’ny fitantanan-draharaha noho ny fanatontoloana sy ny zavatra hoentiny, hatramin’ny androany, mijoro sy mihodina ara-dalàna ity orinasa ity ». Tsy mbola nisy ny tsy fandraisana karama […]
Teny sy soratra : hanao zaikabe ny FMTS
Par Taratra sur 12/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Hiatrika ny zaikabe voalohany ny Federasiona mpikanto teny sy soratra (FMTS). Fivoriambe hotanterahina anio etsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Hanaovan’ny fikambanana tsirairay mivondrona ao anatin’ity federasiona ity tatitra momba ny asa vitany. Tatitry ny birao foibe. Hanitsiana sy hanatsarana ny sata fototra sy ny fitsipika anaty ary handraisana izay hevi-baventy hitondrana ny federasiona mandritra ny fotoam-piasana […]
Haody : fanatontoloana ny kolontsaina
Fa angaha moa voatery handalo izany fanatontoloana izany avokoa ny rehetra ! Tsia ! Raha ny kolontsaina sy ny zavakanto, ohatra, mety ho toy ny fady ny fidirana ao anatin’io « fanabontoloana » io satria ho montsana tanteraka ny maha izy ny firenena iray raha izay no mitranga. Raha ho an’ny hira manokana, manana ny salegy, bahoejy, bagasy, sns, […]
Lalao Fihezama : hisy fifaninanana ho an’ny ratsy tarehy
Ankoatra ny fifaninanana ara-panatanjahantena, hanana ny toerany koa ireo hetsika ara-kolontsaina mandritra ny « Lalao Fihezama », hotanterahina any Brickaville ny 16 hatramin’ny 20 aogositra izao. Misongadina indrindra amin’izany ny fifaninanana ho an’ny ratsy tarehy. Tsy fahita firy eto amintsika na efa malaza aza any ivelany any aza ny fifaninanana ho an’ny ratsy tarehy. Izany hoe, izay […]
Tatitra momba ny fahalalahan’ny fivavahana : mpino silamo ny 25 % -n’ny vahoaka malagasy
Nivoaka ary nampahafantarin’ny masoivoho amerikanina ny tatitra iraisam-pirenena momba ny fahalalahan’ny fivavahana ho an’ny taona 2015 eto amintsika. « Vinavinain’ny governemanta amerikanina fa mahatratra 23,8 tapitrisa ny isan’ny mponina eto Madagasikara raha ny tombana ny volana jolay 2015. Manaraka ny finoana nentin-drazana, araka ny fanisam-bahoaka farany ny taona 1993 ny 52%. Kristiana ny 41% ary Silamo […]
Firaisamonina sivily hetsika Rohy : hampitombo herisetra ny fanampenam-bava mpanao gazety
Par Taratra sur 12/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Mby aiza ny lalàn’ny fifandraisana? Eo an-tanan’ny HCC. Manaitra ny hetsika Rohy fa hampitombo herisetra ny fanampenam-bava mpanao gazety… “Hampitombo ny fifankahalana sy ny herisetra ary ny fizirizirian-kevitra fotsiny ihany ny fanampenam-bava ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena fa tsy hitondra any amin’ny tena ady hevitra sy ny fihainoana ny hevitry ny hafa.” Fanambaran’ny firaisamonina […]
Air Madagascar : mitohy ny fanafoanana zotra
Fotoana mahabe ny mpandeha! Mitohy ny tsy fahatomombanana ao amin’ny kaompania Air Madagascar. Foana ny zotra anatiny, mampitohy an’Antananarivo mankany Toliara sy ny avy eto Antananarivo mankany Nosy Be, anio 12 aogositra. Tsy miantoka ny fampiantranoana ny mpandeha anefa ity kaompania ity, fa voatery raisin’ireo orinasa mpikarakara mpandeha na mpizahatany an-tanana izany. Ho an’ny orinasa […]
Fanaraha-maso ny varotra : nitentina 1,2 miliara Ar ny entana tsy mazava
Nanara-maso ifotony ny mpandraharaha sy ny mpivarotra ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, nanomboka ny 31 mey teo. Nitotaly 1,2 miliara Ar ny tentimbidin’ny entana nampangaina fa tsy nanara-dalàna, tamin’ireo iraka 200 natao. Marihina fa tsy sazina avy hatrany ny mpivarotra tsy nanara-dalàna, fa tsy maintsy manaraka ny dingana samihafa. Ao anatin’izany ny fe-potoana iray […]
Fisolokiana ho mpiasan’ny Jirama : lehilahy voasambotra rehefa nokarohina ela
Ela nitoratorahana teo amin’ny fanaovana asa fisolokiana ho mpiasan’ny Jirama ny lehilahy iray monina any Toamasina, ka saron’ny vela-pandriky ny jirama sy polisy tany amin’ny Bazarikely, ny marain’ny alakamisy teo tany Tanamakoa. Nambaran’ny talem-paritry ny Jirama, Raveloson Léonard, fa efa miisa dimy be izao ny fitorian’ olona tonga ao amin’ny Jirama. Ireo tokantrano voasoloky ireo […]
Nahazo loharanom-baovao ny filohan’ny vovonana Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto, fa nohafahan’ny fitsarana any Singapour ny voampanga, Wong Wee Keong, mikasika ny trafika andramena miisa 30.000. Afaka mampiakatra ny raharaha any amin’ny fitsarana ambony anefa ny mpitory, ny fampanoavana any Singapour. Nomarihin’ny filohan’ny AVG fa mety ho afaka roa na telo herinandro vao tena […]
Toamasina : ravan’ny polisy ny tambajotran-jiolahy raindahiny amin’ny fanendahana
Jiolahy miisa sivy indray saron’ny polisin’ny Fip ao Ankirihiry sy ny Centrale ao Bazarikely Toamasina, ny talata alina teo. Jiolahy raindahiny ireto tratra ireto… Noraisim-potsiny ireo mpifoka rongony telo lahy saron’ny polisin’ny Fip tao Ambolomadinika Toamasina ny alin’ny talata teo. Tratra tany amin’izy ireo nandritra, ny fisafoan’ny polisy, koa ny fonosan-drongony miisa 75 sy ravina […]
Lalamby Isotry : mahalany fonosan-drongony roa isan’andro Rasta
Nidoboka am-ponja omaly Rasta izay voasambotry ny polisy avy ao amin’ny poste de police Ilanivato teny amin’ny lalamby Isotry, afakomaly maraina. Nandritra ny fisafoana nataon’ny polisy teny amin’iny faritra Isotry sy Andavamamba iny no nahatrarana azy nidonadonaka rongony teo amin’ny lalamby Isotry. Mbola nahitana fonosan-drongony miisa 100 tany aminy nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Nilaza […]
Mangoro : tratran’ny polisy ireo mpangalatra menaka
Saron’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) sakelika faharoa, tao Mangoro Moramanga ny asabotsy maraina lasa teo ireo lehilahy miisa dimy voarohirohy ho nangalatra menaka tanaty bidao mavo miaty 20 litatra. Araka ny fanazavan’ny polisy, kamiaobe semi-remorque iray nitondra menaka amin’ny bidao avy any Toamasina no lasibatra tamin’izany. Tratra teo am-panaovana ny asa ratsiny mihitsy […]
Par Taratra sur 12/08/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Inona ihany re no zavatra mandeha ara-dalàna eto amin’ny firenena ? Angamba hiara-kihoraka ny rehetra hoe : tsy misy ! Aoka tsy handeha na hanakatra lavitra. Ohatra iray, mitohoka amin’ny tenda ny ndeha horaisina, ny amin’ny famatsian-jiro sy ranon’ny Jirama. Tato anatin’ny andro maromaro izao, mampikaikaika sy mampitaraina fatratra ny ankamaroan’ny mpanjifa ny fiverenan’ny delestazy sy ny fahatapahan-dranon’ny […]
Nosokirina vao tafavoaka ilay mpamily : nivadika ambony ambany ilay 4X4 teny amin’ny digue
Par Taratra sur 12/08/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Ny fialana ireo fotaka teo amin’ny arabe no voalaza fa niteraka ity lozam-pifamoivoizana nihatra tamin’ity fiara 4X4 hyunday iray, teny amin’ny lalana digue, ampitan’ny kianja Makis, omaly maraina be ity. Nivadika ambony ambany ilay fiara ary nosokirina mihitsy vao tafavoaka tao ny mpamily azy. Ambony ambany, ary nipitika lavitry ny fiara mihitsy ny “train avant” […]
Par Taratra sur 11/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Mbola mila ezaka goavana. Tontosa ny talata 9 aogositra teo, tao Centrorio, ny famaranana mivantana teo amin’ny fibatana fonjamby, sokajy -63 kg vehivavy, amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O) any Rio, Brezila. Anisan’ny nanana solontena tokana tamin’izany, teo amin’io sokajin-danja io, i Madagasikara tamin’ny alalan-dRavololoniaina Elisa Vania. Tany amin’ny laharana faha-12 tamin’ny 15 nifaninana sy niady […]
Hiditra an-tsehatra, indray ny Makis de Madagascar sokajy “junior”. Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), sokajy 1B. Hiady ny toerana hiakarana amin’ny sokajy 1A, izy ireo amin’ity. Hotontosaina, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny 25 – 28 aogositra, ho avy izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 1B), sokajy “junior”. Hiady izany, […]
Razafinjatovo Honoré. Mpanazatra ny klioba-na volley sokajy diviziona voalohany lehilahy, GNVB. Izy no solontenan’i Madagasikara niatrika ny fiofanana mpanazatra “niveau III” tany Tunis, Tonizia, ny 1 – 8 aogositra teo. Raha ny fampitam-baovao, iray avy ny an’i Madagasikara sy Maroc ary Congo Brazzaville. Nahatratra 23 kosa ny an-dry zareo Tonizianina, mpampiantrano, raha enina avy any […]
Isotry : misokatra indray ny Tranompokonolona Isotry
Efa misokatra ho an’ny rehetra ny Tranompokonolona Isotry ankehitriny. Vita ny fanamboarana ny atin’ny trano izay nataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Nohavaozina ny tafo atiny sy ivelany, ny seza, ny loko… Azo ampiasaina ny trano amin’ny fotoana mahamety azy na alahady aza. Mahazaka olona hatramin’ny 720 ity toerana ity. Efa misy koa ny fiantsonan’ny fiara voatokana […]
Anisan’ireo firenena nomen’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), tombony hisitraka amin’ilay tetikasa “Live your goals”, i Madagasikara. Fandaharanasa, hampirisihana sy hanentanana ireo ankizy vavikely sy tovovavy, hilalao baolina ary hiditra ao anatin’ity tontolon’ny mpanjakan’ny fanatanjahantena ity. Nampahafantarina omaly, teny amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, ny fanombohan’izany tetikasa izany, izay haharitra efa-taona. Tovovavy 250, eo amin’ny 8 ka hatramin’ny 24 […]
Teatra Monisipaly Isotry : « Tsara ny fahavitany fa mila averina koa Ambatovinaky »
Tsy ampy ny toerana hoenti-mampivelatra ny kolontsaina malagasy. Ny efa nijoro, rava… Ankehitriny, vita ny fanavaozana ny Teatra Monisipaly Isotry. Tontosa soa aman-tsara ny fanavaozana sy fanatsarana ny Teatra Monisipaly Isotry. Vaovao mahafaly ho an’ny tontolon’ny kolontsaina malagasy amin’ny ankapobeny. « Zava-dehibe ny fahavitany satria toerana manan-tantara io. Manana ny lanjany eo amin’ny firenena sy ny […]
« Précédent 1 … 1 204 1 205 1 206 1 207 1 208 … 1 395 Suivant »